Xagee loo aadayaa Isgaarsiinta Emailka? | Martech Zone
Xagee loo aadayaa Isgaarsiinta Emailka?
Axad, Oktoobar 25, 2009 Arbacada, February 10, 2016 Adam Yar
Waxaan ku dhacay caado aad u xun oo ah inaan u diro emayllada qaar tallaabo dhan bil ama ka badan. Waxaan u hayaa nidaam kala sooc emayllada imanaya. Haddii aysan u baahnayn feejignaanteyda deg-degga ah ama ficilkeyga waqti gudahood si looga fogaado xanuun nooc uun ah, kaliya waan u oggolaanayaa inay fadhiistaan. Malaha taasi waa wax xun. Ama maya.
Mawduucan oo dhan wuxuu iga helay inaan la sheekaysto saaxiibkay (dhibbanaha muddadayda "sugitaan") oo ku saabsan sida isticmaalka ama ujeeddada (ama labadaba) e-maylku isu beddelayso. Ma haysto daraasad cilmiyaysan oo aan ku tixraaco halkan. Tani dhammaantood waxay ku saleysan yihiin kaliya indha indhayntayda sida wada xiriirka ganacsiga iyo sida qof leh, sanadihii la soo dhaafay, si dhakhso leh u qaatay tiknoolajiyada cusub. (Anigu kama joogo cirifka hore ee qallooca, laakiin waxaan ku jiraa qaybta hore ee jiirada jilicsan.)
Ka fikir isbeddelka ku yimaada habka aan ula xiriirno dhanka qoraalka. Waxaan ka hadlayaa dadka badan, maahan aqoonta tiknoolajiyadda, habka. Gelinkii hore ee maalintii waxaan dirnay waraaqo boosta ah ama telegram mar mar ah. Waxaan ogaanay sida ugu dhaqsiyaha badan kuwa xawilaadaha iyo howlaha habeenki. Oo waxaa jiray fakis. Markii emaylku yimid, waxaan qornay wax u eg waraaqo? dheer, si sax ah loo calaamadiyey, xaraf weyn, higaada iyo isgaarsiin habeysan. Waqti ka dib qaar badan oo ka mid ah emaylladaas waxay noqdeen kuwa hal saf ku socda. Hadda, waxyaabaha sida SMS, Twitter iyo Facebook waxay na siinayaan gaabis iyo deg-deg noo oggolaanaya inaan ka boodno hal shay ilaa mid kale.
Maxaa noqonaya emaylka? Waqtigaan la joogo, wali waxaan fiirinayaa emaylka foomka dheer, macnaha, hal-ka-mid-abuurka ah? wax aniga ama aniga qaateha loola dan leeyahay shaqsiyan, laakiin aan lagu muujin karin kaliya 140 xaraf. Sidoo kale wali waxaan u adeegsadaa inaan ku raadiyo wararka aan codsaday. Iyo, dabcan, wali waxaan u isticmaalaa inaan kula hadlo dadka aan ka gaarin fariimaha kale ama warbaahinta bulshada.
Haddii aan joogo meel u dhow midigta indha-indhayntayda, is-gaadhsiinteena is-gaadhsiintu waxay saameyn weyn ku leedahay suuqgeynta iimaylka Marka, maxaad u malayn? Meeday emailku? Fadlan ka faallo hoos. Ama, haye, ii soo dir email.
Tags: runtiiemaylka ku habboon moobiilkadigniinta baraha bulshadadhismaha kooxda
Suuqa Suuqa - Maareynta Mawduucyada La Fududeeyey
MC Hammer 2.0 iyo Shahaadada Shakhsiyeed
Oktoobar 25, 2009 at 10:52 PM
Waxaan u maleynayaa inay had iyo jeer jiri doonto meel loogu talagalay emaylka… ama ugu yaraan wax u eg sida aan ula falgalno emaylka maanta. Waxaan marwalba ubaahan doonnaa qaab si toos ah hal-hal-qoraal xiriir ah, oo waxaan leenahay xaalado waxa aan qoreyno ubaahan doonaan in laga faahfaahiyo 140 xaraf oo ogolaada.
Quruxda tikniyoolajiyadda soo korortay ayaa ah inaan yareyn karno farriimaha emailkeenna iyadoo la adeegsanayo waddooyin kale oo isgaarsiineed oo aan ku habbooneyn qeexitaankaas. SMS-ka fariimaha degdega ah ee gaaban, IM oo loogu talagalay farriinta waqtiga-dhabta ah, Twitter iyo Facebook ee fariimaha hal-ka-badan ah, RSS ee helitaanka ogeysiisyada, Google Wave ee wada shaqeynta kooxda, iyo wixii la mid ah.
Oktoobar 25, 2009 at 10:55 PM
Waan ku raacsanahay in emaylku is beddelay xoogaa laakiin mararka qaarkood waxaa la i xasuusiyaa inaan ka mid ahay kooxdaas "korsanayaashii hore" bilowga qalooca. Sababtaas awgeed, waxaan mararka qaar la yaabayaa markii laygu soo xusuusiyo dhexgalka dadka kale in dad badani wali "helitaanka" e-maylku dhacayaan. Waxaan fiiriyaa emaylka sida dhexdhexaadka ganacsiga tooska ah, halka Facebook loogu talagalay fariintayda shaqsiyadeed. Anigu ma haysto xisaab emayl shaqsiyeed, kaliya xisaab ganacsi. Iimeylka aniga ayaa sidoo kale ah sanduuqa sanduuqa dhexe ee macluumaadka… maahan kaliya xiriirka. Wargeysyadayda waxay ku yimaadaan iimayl, digniintayda, farriimahayga ganacsi, iwm waxaanan u isticmaalaa Inbox Zero si aan wax walba uga shaqeeyo.
Oktoobar 26, 2009 at 2:33 AM
Mid ka mid ah waxyaabaha aan sida badan ula halgamayo emaylka ayaa ah ku tiirsanaanteenna. Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa isoo wacay usbuucan oo i weydiiyay sababta aan uga jawaabi waayey e-maylkeeda… dabaysha oo ah in qof uu bilaabay inuu u calaamadeeyo sida SPAM iyo galka Junk Email.
Waa nasiib darro in e-mayl uusan isbeddelin. Sidoo kale wax kama tareyso in ilaaliyeyaasha emailka (Microsoft Exchange iyo Outlook) ay weli ku shaqeynayaan teknoolojiyad 10 sano jir ah. Muuqaalka ayaa wali ku bixinaya ereyga ereyga halkii uu la jaan qaadi lahaa teknoolojiyada cusub !!!
Waan ku raacsanahay in teknoolojiyaddan kale ay caawinayaan… laakiin waxaa laga yaabaa inaan runti ka baryayno wax cusub oo soo socda maaddaama emailku leeyahay arrimo badan oo ku tiirsan.
Oktoobar 26, 2009 at 1:45 PM
Ma aragtay qoraalkan Tim O'Reilly?
kani ma ku dhiirrigeliyey qoraalkaaga:
Oktoobar 26, 2009 at 9:19 PM
Waxaan u fahmay ujeedadaada xitaa waxaan isticmaalayay emailkeyga marba marka ka dambeysa asxaabteyda badankood waxay ii soo diraan messagest o koontada Shabakada Bulshada. Laakiin waxaan u maleynayaa in e-maylka uusan dhiman ama u dhow dhimashadiisa la hubo iyadoo la adeegsanayo astaamo cusub oo cusub oo weliba halkan lagu sii hayn doono muddo dheer.